Iimpawu ezi-4 zeNdlu yokulala eSpeightstown, eSt Peter - I-Airbnb
Iimpawu ezi-4 zeNdlu yokulala eSpeightstown, eSt Peter
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguG
Le Ndlu ibekwe ngokumangalisayo kumqolo ongasentla kwe-Speightstown enembono entle yolwandle / ukutshona kwelanga okumangalisayo.
Eli khaya linemvakalelo yendawo yokuhlala yaseBarbados eyimbali ngokwenyani.
Indlu yenzelwe ukuba ibe yeyamasiko kodwa inazo zonke izinto eziluncedo zangoku kunye nesimbo esifunwa ngumntu kwikhaya leholide.
Onke amagumbi ama-4 abanzi aneempawu zawo zomntu ngamnye, amagumbi okuhlambela ama-3 kunye neendawo ezininzi zolwamkelo lwangaphakathi / lwangaphandle, ichibi njl.njl. Ezantsi kwendlela kukho iibhari/iindawo zokutyela ezithandekayo.
Kukho iipavillions ezimbini ( indawo yokutyela kunye nokuphumla ) nganye inomoya othatha ulwandle kunye nemibono yokutshona kwelanga . Umgangatho wedama le-limestone oneendawo zokuhlala ezi-4 ezitofotofo zelanga zincoma ngakumbi ezi ndawo. Ilanga likhanya echibini imini yonke kodwa kwabo bafuna umthunzi kukho iindawo ezininzi ezitofotofo
Le yindlu ekufanelekele ukonwabisa kwaye ibone izinto ezininzi ezenziwa ngabantu abadumileyo kule minyaka idlulileyo!
Onke amagumbi okulala aneendonga ezingqindilili kunye neefestile ezinomtsalane " Jalousie " . Imigangatho yintliziyo emfusa ngomthi omnyama okanye ikalika. Onke amagumbi okulala anabalandeli kwakunye neAC.
I-TV / igumbi lokuhlala line - 52 " iplasma tv kunye neNetflix . I-WIFI yethu / i-intanethi i-fiber optic kwaye ukudibanisa kuhle kakhulu kwiBarbados !!!
4.63 · Izimvo eziyi-70
I-Speightstown yindawo efanelekileyo yeBarbados. Yayikade yaziwa ngokuba yiBristol encinci kwaye ibheyi yayiza kuzala zizikolo. Ngenkulungwane yeshumi elinesithoba ikomkhulu lafudukela eBridgetown kwaye isantya sobomi sacotha eSpeightstown
Ndingumakhi wepropathi oweza eBarbados kwiminyaka eyi-12 eyadlulayo kunye nosapho lwam - ( size kwiholide kwaye asizange sibuye!) . Ngendikhe ndakhetha naphi na ukuba ndihlale kwaye ndicinge ngoluntu olunamasango afana neRoyal Westmoreland okanye iSugar Hill.
Sagqiba ekubeni sifuna ukwamkela imbali kwaye sithobe umoya waseBarbados - asikwazanga ukufumana indawo engcono kune Speightstown . Ngoku ilikhaya kuphuhliso oluphezulu oluquka iimarinas ePort St Charles nasePort Ferdinand
I-Speightstown kuphela kwedolophu engaselwandle eBarbados apho unokubona ngokwenene ulwandle kwaye ubukele abantu bendawo besenza imisebenzi yabo yemihla ngemihla. Ine-vibe emangalisayo kwaye indawo yokutyela / indawo yebha sele ihambile isenza umahluko owamkelekileyo kwiHoletown yorhwebo.
Izinto esizithandayo zalapha ziquka i-Little Bristol Bar (yeye-raconteur u-Nick Mackie), i-Fishpot, i-Fishermans pub kunye ne-Yacht club e-Port St Charles. Ulwandle lwaseNikki luvulwe ngoJanuwari 2018.
Kukho ivenkile enkulu e Speightstown yezinto ezibalulekileyo kodwa uninzi lweendwendwe lukhetha ukuthenga eWarrens ( 15 mins ngemoto ) okanye eHoletown ( 10 mins ) .
Umbuki zindwendwe ngu- G
UGrace umgcini-ndlu wethu ebenathi iminyaka esi-7 kwaye ngumhlobo omthembileyo kunye nomsebenzi onenkathalo.
UDavid ( van / umqhubi weteksi ) yindoda emangalisayo , umhlobo osondeleyo wosapho kunye nomthombo wolwazi kunye nemvumi elungileyo !!
UDavid ( van / umqhubi weteksi ) yindoda emangalisayo , umhlobo os…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Warleigh